अफगानिस्तानमा सैनिक कारबाहीमा ६ लडाकू मारिए - muktikhabar
अफगानिस्तानमा सैनिक कारबाहीमा ६ लडाकू मारिए
मुक्तिखबर	काठमाण्डाैं	चैत १५, २०७७
जलालाबाद । अफगानिस्तानमा बम बनाउने कार्यमा संलग्न छ जना विद्रोही सेनाको कारबाहीमा मारिएका छन् । सैनिक अधिकारीहरुका अनुसार पूर्वी नान्घरहर राज्यमा शनिबार राति गरिएको कारबाहीमा एक लडाकू मारिएका थिए । उनी इस्लामिक स्टेट समूहका लडाकू पनि रहेका थिए ।
अफगानिस्तानमा सक्रिय विद्रोहीहरुले घरेलु बारुदी सुरुङ (आइइडी) निर्माण गरी सुरक्षा फौजलाई लक्षित गर्ने गरेका छन् । यी हतियारको जथाभावी प्रयोगले सर्वसाधारणको पनि ज्यान जाने गरेको छ ।
यस्तै, दक्षिण हेल्मन्ड प्रान्तमा तालिबान समूहमा आबद्ध पाँच जना लडाकू मारिएका छन् । नवा जिल्लामा तालिबान समूहलाई लक्षित गरी भएको आक्रमणमा ठूलो परिमाणमा हातहतियार र सवारी साधन सेनाले ध्वस्त बनाएको छ ।
तर उक्त सैन्य कारबाहीका बारेमा दुबै लडाकू समूहले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । –सिन्ह्वा
१५ चैत २०७७, आइतवार १७:०२ बजे प्रकाशित
भारतमा एकै दिनमा झण्डै ६३ हजार कोरोना सङ्क्रमित भेटिए
“उच्च शिक्षाका लागी आलाप दोहोरी घर” भन्ने मुल नाराका साथ आलाप दोहोरी प्रतियोगिता २०७७/०७८ सुरु
पाकिस्तानमा भिषण वर्षा, १२ जनाको मृत्यु
एनआरएनए अधिवेशन : क-कसले गरे उम्मेदवारी घोषणा ?
तालीवानीहरुले अफगानस्तानका मिडिया पनि आफनो नियन्त्रणमा लिएर भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गर्दै
तालिबानको विषयमा एलन मस्कको ट्विट, के भनिरहेका छन् मानिसहरु ?
अफगानिस्तान द्वन्द्: त्यो सम्झौता जसले दुई दशकपछि अमेरिकी फौजलाई फिर्ता पठायो
तालिबानको हातमा कसरी पुगे यति धेरै अमेरिकी हतियार ?